Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyada qarixii ka dhacay Ex-Control Afgooye. | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyada qarixii ka dhacay Ex-Control Afgooye.
Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyada qarixii ka dhacay Ex-Control Afgooye.
Al-Shabaab ayaa ku dhowaad 72 Saacadood kadib waxey sheegatay mas’uuliyada Ismiidaamintii ka dhacday Isgoyska mashquulka badan ee Ex-Control Afgooye ee Galbeedka magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Al-Shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raagi (Cali Dheere), ayaa Warbaahinta taageerta Shabaab u sheegay in weerarkan ay ku beegsadeen Kolonyo isugu jirta Turki iyo askar Soomaali ah islamarkaana uu khasaare lixaad leh kasoo gaaray.
Afhayeenka guud ee Al-Shabaab oo hadlayay 24 daqiiqo ayaa tilmaamay in qaraxaas uu khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed ka soo gaaray dad shacab ah oo qaraxaas la kulmay xilli ay wadada marayeen.
Si kastaba, Sirdoonka Soomaaliya ayaa maanta sheegay iney hayaan macluumaad la xiriira inuu dal shisheeye mas’uul ka ahaa weerarka Ex-Control Afgooye, kaasoo ay la wadaageen madaxda sare ee dalka.
NISA ma sheegin dalka ay ku tuhmayaan weerarkan, wallow warkooda uu yimid saacado yar uun kadib markii wargeys laga leeyahay dalka Tukiga uu qoray in Imaaraatka Carabta uu ka danbeeyay weerarkan, sababtana ay tahay inuu ku xumeynayo howlaha Turkiga ee dalkan.
Xildhibaano iyo Siyaasiyiin mucaarad ku ah Villa Soomaaliya ayaa warka NISA ku sheegay inuu yahay mid mas’uuliyada weerarka looga leexinayay Shabaab, iyagoo sheegay inaan loo baahneyn warka ka soo yeeray Sirdoonka Soomaaliya.
Ku dhowaad 80 qof ayaa ku geeriyootay weerarkan, kuwaasoo u badnaa ardey waxbarasho u socotay, halka dhaawucu uu gaarsiisan yahay 178 kale, iyadoo ku dhowaad 40 qof oo dhaawacyada daran ahaa loo kala qaaday dalalka Turkiga iyo Qatar.
Previous articleSawirro: Maamulka Gobolka Banaadir oo ka shiray xoojinta amniga caasimadda.
Next articleDhageyso+Wareysi: Hay’adihii gar gaarka siin jireen shacabka degmada waajid oo hakad galay.